Caafimaadka Qaybaha Qalabka Caaryada soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha - Shiinaha Warshadda - Shenzhen Xiangfu Go'aan Warshadaha Co., Ltd
Guriga > Alaabada > Qalabka Caaryada > Qalabka Birta Caaryada > Caafimaadka Qaybaha Qalabka Caaryada
The soo socda waa ku saabsan caafimaad qaybo qalabka caaryada la xiriira, Aniga rajo ku I caawi adiga ka fiican fahmay caafimaad qaybo qalabka caaryada.
Xiangfu Qalabka Caafimaadka Mashiinka Xameeyaha Mashiinka caaryada wuxuu sifeeyaa qeybaha Caafimaadka ee saxda ah
1.Maxulka Qalabka: Birta
2.Sureface treatment: Sida macaamilku u codsado
Sawirka 3.3D: STEP ama qaabka "IGS"
4.Runner: Run or Cold Runner
5. Waqtiga Gaarsiinta: 15-60 maalmood
1. R&D: Waxaan taageernaa macaamiisha R&D. Samee feylasha ama hagaajinta qaabeynta haddii aad u baahatid.
2. oraahda: oraahda loo yaqaan moram ayaa ku dhamaan doona 1 maalin sida ku cad macluumaadka aan helno.
3. Gorgortan: Tayada, qiimaha, sheyga, wakhtiga keenida, sheyga bixinta iyo wixii la mid ah.
4. Naqshadeynta Mashiinka: 3-5 maalmood ee caaryada iyo naqshada sawir 3D / 2D.
5. Dhoobo-cad: Marka loo eego codsiyada macaamiisha ay ku dhisaan caaryada ka hor inta aysan caaryada sameynin. Waxaan u diraa naqshad caaryada si loo ansixiyo macmiilka marka hore. Caaryada ayaa badanaa lagu dhamayn doonaa 40-50 maalmood.
6. Tijaabada Mashiinka: Marka caaryada la dhammeeyo, waxaan tijaabineynaa wasakhahaasi si aan u hubinno inay qanacsan yihiin baahida macaamiisha. Oo waxaan u diri doonnaa saamiyo loogu talagalay tixraaca macaamiisha.
7.Sampleshoot: Haddii muunadda ugu horreysa ay soo baxdo kuma qanacsana macmiilka. Waxaan badalnaa caaryada oo aan la kulannaa qanacsanaanta macaamiisha.
8. Alaab Gaarsiin: Alaabada la keeno Badda ama Hawada, iyadoo la raacayo shuruudaha macaamiisha.
1. Qalabka Mashiinka Q / C
a) Hubinta birta caaryada ah (adkaanta, ogaanshaha cilladaysan)
b) Hubinta waxyaabaha u nugul caaryada (adkaanta, cabirka)
2. Habka samaynta dhoobada Q / C
a) Hubinta naqshadda (nashqad qaabeed, naqshad caaryo, sawirka wejiga ka samaysan)
b) Hubinta cabirka caaryada (sida ku xusan sawirka)
c) Tijaabada caaryada (eeg caaryada, shaqada, muunad)
1. Meeday shirkaddaadu?
Waxaan deganahay Tai zhou, Zhejiang, China mainland.50 daqiiqo garoonka diyaaradaha Luqiao.15 daqiiqad ka timaada tareenka Taizhou.Waxaan si diiran kuugu soo dhaweynayaa inaad booqato shirkadeena oo aan la wareegi doono shirkadeena.
2.Maxaad ka leedahay xakameynta tayadaada?
Waxaan leenahay koox xirfadlayaal ah si aan u xakameyno tayada caaryada, maadaama aan garowsan nahay in xakamaynta tayada ay tahay awoodda koowaad ee ganacsiga.
3.Shee nooc noocee ah ayaad u isticmaashaa dusha sare ee caaryada?
1) Muraayadda muraayadda
3) Daaweynta Cabbirka ee loo yaqaan 'Chromium treatment' ee xudunta iyo daloolka
4) Daaweynta kuleylka Nitride & vacuum
4. Sidee loo oggolaadaa shay-baarka?
1) U tagi karo tijaabada caaryada si toos ah
2) waxaan u soo diri doonaa muunado & caaryada fiidiyowga socda.
Hot Tags: Caafimaadka Qaybaha Qalabka Dhoobo, Shigudahaaha, Bixiyeyaasha, Warshadda, Soosaarayaasha, Sameeyay gudaha Shigudahaaha, Aasaasay, Rakhiis, Qiimo, Oraah, Iibso, Sare Tayo, Raagaya, Hoose Qiimo, Gudaha Dukaan Bilaash Muunad
Qalabka Alaabada Keystroke Howlgal Gudi
Xiriir Jiiska Koronto Dhamaad Jiiska Qalabka Caaryada
Warshadaha Qalabka Caaryada Alaabada